SOICARE oyi alụlụ na a na-ekpo ọkụ alụlụ aromatherapy n'elu jupụta ikuku humidifier, China SOICARE jụụ alụlụ na a na-ekpo ọkụ alụlụ aromatherapy n'elu jupụta ikuku humidifier Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SOICARE jụụ alụlụ na a na-ekpo ọkụ alụlụ aromatherapy n'elu jupụta ikuku humidifier
Ọ na-ekpo ọkụ ma dị jụụ Humidifier, Aromatherapy, Disinfection
Alụlụ Cool: 18H, Igwe ọkụ: 10H
Alụlụlụ Ọkụ: 550ml / H, Igwe dị jụụ:300ml / H
1000 A tụkwasịrị
Nri 100000 kwa ọnwa
Nke a humidifier na ụdị abụọ alụlụ, oyi alụlụ na-ekpo ọkụ alụlụ.
1. Ọrụ na Akụkụ:
1). Ngosipụta ọkụ ọkụ dị elu
2). Atọ etoju nke igwe jụrụ oyi na alụlụ ọkụ dị
3). Ọrụ oge site na 1h ruo 12h
4). Iru mmiri Isetịpụ from30% ~ 90%
5). A na-edozi iru mmiri ahụ site na 5% ọ bụla. Mgbe iru mmiri rutere ọnọdụ ntọala, igwe ahụ ga-akwụsị ịrụ ọrụ. Ma mgbe iru mmiri ụlọ ahụ dị n'okpuru ntọala ntọala nke 5%, igwe ahụ ga-amaliteghachi ọrụ
6). Na ọrụ ísì ụtọ
7). Ọkwa abụọ, 360 rotatable alụlụ nozzles
8). Nchedo ụkọ mmiri
9). Na-akpaghị aka kwụsị ịrụ ọrụ mgbe ị na-eweli mmiri mmiri
10). Na ọnọdụ ụra
11). Ikanam ngosi nwere ike gbanyụọ iji belata nsogbu ọgba ụra. N'okpuru ọnọdụ ụra, igwe ahụ ga-eguzo na-enweghị ụda ọ bụla mgbe mmiri na-adịghị, LED ga-egosi bọtịnụ na-enweghị mmiri.
12). Ime akara bụ ịnara
13). Ijuputa ihe eji emejuputa ihe nke oma na oki mmiri
14). Nnukwu ikike iru mmiri, na-eme ka iru mmiri nke ụlọ ahụ dum dịkwuo elu
15). Ime ụlọ dị elu nke ụlọ na-eme ka ahụ sie ike.
2. Sterilization ọrụ rụzuru site Atomization & Vaporization Nchikota Technology
1). Jiri teknụzụ PTC kpo oku, enwere ike ikpo ọkụ mmiri na 100℃ igbu nje na-ekpo ọkụ dị ka alụlụ ọkụ.
2). Jiri ultrasonic Transducer mepụta jụụ alụlụ
3). Na flue, 100 ℃ alụlụ na-ekpo ọkụ na-agwakọta ma na-ebugharị okpomọkụ na alụlụ dị jụụ iji gbuo nje ahụ. Stgba ọmụmụ nwoke nwere ike iru 99.53%. Igwe okpomọkụ na-ekpo ọkụ nke ewepụtara bụ ihe dị ka 60℃ ma onye ofufe na-agbapụ ikuku ikuku.
280W (Mmiri dị jụụ na 25W)
iru mmiri iru mmiri ≤95% RH, okpomọkụ: 5℃~45℃
High alụlụ Volume
550mL / awa
Low alụlụ Volume
300mL / awa
SP-G75 120ml Glass Mkpa Mpempe Aromatherapy Diffuser
Batrị SP-A06 100ml Na-arụ ọrụ Obere Mpaghara Dị Ọcha Mmanụ Ala
Ngwakọta mmanụ dị mkpa ume na-eche mmanụ dị mkpa maka Diffuser
SOICARE oyi alụlụ humidifier diffuser 5.5L n'elu jupụta ultrasonic humidifier maka hypochlorous acid mmiri na-eji